Haweenka bilayska Tansaaniya oo loo tababarayo la-dagaallanka tacaddiyada ku saleeysan jinsiga - Sabahionline.com
Haweenka bilayska Tansaaniya oo loo tababarayo la-dagaallanka tacaddiyada ku saleeysan jinsiga
Afartan iyo lix haween ka tirsan bilayska Tansaaniya ee Mwanza ayaa Sabtidii (2-dii Maarso) waxa la siiyay tababar ku saabsan farsamooyinka looga hor-tago tacadiyadda ku saleeysan jinsiga, sidaana waxa sheegay The Citizen-ka Tansaaniya.
Tansaaniya oo bilowday barnaamij lagula dagaallamayo tacadiyada ku salaysan kala duwanaashaha jinsiga
Warbixin ayaa sheegtay in Sansibaar ay kaalinta hore uga jirto xad-gudubyada ugu badan ee ku salaysan jinisga ee ka dhaca dalka
Tababarka, oo uu maal-galiyay GG Trust, ayaa waxaa loo soo qaban-qaabiyay si looga jawaabo kororka shilalka tacadiyada ku saleeysan jinsiga ee ka dhaca Aagga Harada Tansaaniya.
"Kadib baaritaan qotto dheer, waxa la ogaaday in inta badan haweenka ku nool miyiga ay baylah u yihiin kufsiga iyo noocyo kale oo ka mida tacadiyadda ku saleeysan jinsiga," ayay tiri madaxweynaha GG Trust Stela Mathias. "Tababarkan waxa looga golleeyahay in lagu siiyo farsamooyinka ugu wanaagsan ee ay uga hortagi karaan kuwa tacaddiga geeysta."
Mathias waxa ay sheegtay in haweenka bilayska ah ay u gudbin doonaan waxa ay ka barteen tababarka haweenka degaanka taasoo qayb ka ah ol ole kan ka ballaaran oo lagu tababarayo 80 boqolkiiba haweenka Tansaaniya sidii ay isaga difaaci lahaayeen tacaddiyada.
April 4, 2013 @ 02:29:33AM
Anigu waan ku faraxsanahay in aan arrinkaa maqlo, laakiin si arrimuhu sidan uga wacnaadaan, waa in gobol kasta loo sameeyaa masuul madax ka noqda xafiiska u gaara arrimaha Gender-ka, waana in dadkaasi ay noqdaan kuwo khibrad u leh arrimaha Gender-ka. Anigu waxaan ahay qof u dooda arrimaha Gender-ka shaqadayduna waa taas, waxaanan ahay qof khibrad u leh arrimaha Gender-ka.